Aye Nyein's Page - Myanmar in Singapore
HomeLike us on FacebookFollow us on TwitterDiscussionsစင်္ကာပူအကြောင်း၊ သတင်းမြန်မာအကြောင်း၊ သတင်းအလုပ်ကိစ္စနှင့် Passကျောင်းကိစ္စနှင့် သင်တန်းကွန်ပျူတာနှင့် နည်းပညာလူမှုဘ၀နှင့် အထွေထွေရင်ဖွင့်ရန် ကဏ္ဍများDebate ကဏ္ဍများmysing နှင့် ပတ်သက်၍Blogs1စင်္ကာပူအကြောင်းစင်္ကာပူသတင်းမြန်မာသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းအင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍကျန်းမာရေးဗဟုသုတကွန်ပျူတာနှင့်နည်းပညာထူးဆန်းထွေလာရုပ်ရှင်ဂီတနှင့်အနုပညာBlogs2အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးရသစာပေဘာသာရေးမိဘမေတ္တာအချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဟာသကဗျာအထွေထွေJobsRoomsAdvertisementsFootball LIVE
MaleYangonMyanmar Like4members like this
Share Blog Posts (158)Discussions (19)Events in SingaporeGroups (4)PhotosPhoto Albums Aye Nyein's Likes Aye Nyein's Friends
View All Aye Nyein's Groups
Aye Nyein has not received any gifts yet
Aye Nyein's Page
Aye Nyein postedablog postလုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (ဆောက်လုပ်ရေး) စာအုပ်လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (ဆောက်လုပ်ရေး) စာအုပ် ရှေ့လထဲ ထွက်ပါမည်။စာအုပ် - ဈေးနှုန်း ၆၀၀၀ ကျပ် ပါ။ စာအုပ်တွေ ဆိုင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါ ထပ်ကြေငြာလိုက်ပါမယ်။ အားပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ စာအုပ်အလိုရှိသူများ ဆက်သွယ်ပါရန်ဦးမြတ်သွင် - ရန်ကုန် ဖုံး - ၀၉၄၉ ၂၇၂၁ ၂၄ဒေါ်ကျင်ကျင် - ရန်ကုန် ဖုံး -…See MoreSep 27, 2014 0
Aye Nyein postedablog postWork At Height for Supervisors and Work At Height for Workers Coursesလာမည့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ (7/6/14 & 8/6/14) ၌ Work At Height for Supervisors/Workers သင်တန်းများ ရှိပါသည်။ တက်ရောက်လိုသူများ စာရင်းပေးနိုင်ပါသည်။ Supervisor - တစ်ယောက်လျှင် ၂၅၀ Worker - တစ်ယောက်လျှင် ၈၀------------------------------------------------------------- သင်တန်းချိန် Supervisor - စနေ နေ့လည် ၂ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ။ တနင်္ဂနွေ - နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ။သင်တန်းချိန်စုစုပေါင်း (၁၂) နာရီ (စာမေးပွဲ ၃ နာရီ အပါအ၀င်)(ရေးဖြေစာမေးပွဲ ၂ နာရီ၊ လက်တွေ့စာမေးပွဲ ၁…See MoreJun 2, 2014 0
Al_Gee liked Aye Nyein's blog post ခရစ္စတိုဖာပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၂၉)Jun 28, 2013Michael commented on Aye Nyein's blog post ခရစ္စတိုဖာပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၂၉)"Go Ahead"Jun 24, 2013Michael commented on Aye Nyein's blog post ခရစ္စတိုဖာပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၂၉)"Please Continue"Jun 24, 2013Zaw Aung commented on Aye Nyein's blog post ခရစ္စတိုဖာပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၂၉)"ဗဟုသုတအများကြီးရပါတယ်ဆရာ.."Jun 23, 2013Aye Nyein posted blog postsခရစ္စတိုဖာပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၂၉)ခရစ္စတိုဖာပေါက်ကျိုင်း ၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ (၂၈)ခရစ္စတိုဖာပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၂၇)1 more…Jun 22, 2013Medic Boy liked Aye Nyein's profileJun 16, 2013moe pwint liked Aye Nyein's blog post စင်ကာပူတွင် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းအကြောင်းJun 1, 2013Aye Nyein commented on Aye Nyein's blog post လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်စွဲစာအုပ်"ကို ThWin ခင်ဗျား။ ကျွန်တော် အီးမေးမရပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး aye475@gmail.com ကို ပို့လိုက်ပါ။"May 22, 2013Aye Nyein and sithuaung are now friendsMay 22, 2013True View liked Aye Nyein's blog post ခရစ္စတိုဖာပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၂၆)Apr 3, 2013Th Win commented on Aye Nyein's blog post လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်စွဲစာအုပ်"ကိုအေးငြိမ်း ခင်ဗျား ... ကျွန်တော့် e-mail address ကို ကိုအေးငြိမ်း mail ထဲ ပို့ထားပါတယ်။ ကိုအေးငြိမ်းပို့ ပေးမယ့် ဆောင်းပါးတွေ အတွက် ကြိုတင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...."Apr 2, 2013Aye Nyein and Th Win are now friendsApr 1, 2013Aye Nyein commented on Aye Nyein's blog post လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်စွဲစာအုပ်"ကို Th Win ခင်ဗျား။ ဒီစာအုပ်က ကျွန်တော်ရေးတာမှန်ပေမဲ့ Myanmar Safety Development Association က ပိုင်တာပါ။ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆီမှာ စာအုပ်လာယူလို့ရပါတယ်။ soft copy ပေးခွင့်မရှိလို့ မပေးနိုင်တာကိုတော့ ၀မ်းနည်းပါတယ်။…"Apr 1, 2013Th Win commented on Aye Nyein's blog post လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်စွဲစာအုပ်"ကိုအေးငြိမ်းခင်ဗျား ...Safety နဲ့ ပါတ်သက်လို့ သေချာေ၇ဲးပ၊ ၇ှင်းပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုတင်ထားတဲ့ Safety နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေး ကျွန်တော့် e-mail ကို ပို့ပေးလို့ ၇နိုင်ပါလား။ Website က Download လုပ်၇တာ အဆင် မပြေလို့ပါ။"Apr 1, 2013 More... RSS
Studying / Working
MRT Station Near Your Home
Aye Nyein's Blog
လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (ဆောက်လုပ်ရေး) စာအုပ်
Posted on September 27, 2014 at 7:40pm0Comments
လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (ဆောက်လုပ်ရေး) စာအုပ် ရှေ့လထဲ ထွက်ပါမည်။
စာအုပ် - ဈေးနှုန်း ၆၀၀၀ ကျပ် ပါ။ စာအုပ်တွေ ဆိုင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါ ထပ်ကြေငြာလိုက်ပါမယ်။ အားပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ စာအုပ်အလိုရှိသူများ… Continue Work At Height for Supervisors and Work At Height for Workers Courses
Posted on June 2, 2014 at 11:00pm0Comments
လာမည့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ (7/6/14 & 8/6/14) ၌ Work At Height for Supervisors/Workers သင်တန်းများ ရှိပါသည်။ တက်ရောက်လိုသူများ စာရင်းပေးနိုင်ပါသည်။ Supervisor - တစ်ယောက်လျှင် ၂၅၀ Worker - တစ်ယောက်လျှင် ၈၀
------------------------------------------------------------- သင်တန်းချိန် Supervisor - စနေ နေ့လည် ၂ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ။ … Continue ခရစ္စတိုဖာပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၂၉)
Posted on June 22, 2013 at 3:53pm3Comments
(၁၀၉) ပင်နင်စူလာမှ ငွေလွှဲကြပုံ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားဘဏ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော ဘဏ်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲများသော် လည်းကောင်း မရှိသည့်ပြင် ယခင်က နိုင်ငံခြားငွေကို အများပြည်သူများကိုင်ဆောင်ခွင့် မရှိသောကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်သူများမှာ ကိုယ့်မိသားစုထံ ငွေပြန်ပို့လိုလျှင် မိမိတို့ရောက်ရှိရာ နိုင်ငံများရှိ မြန်မာဆိုင်များ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားငွေဝယ်သော အေးဂျင့်များထံမှသာ လွှဲကြရသည်။ ၂၀၁၂ နှစ်လယ်လောက်ကစ၍… Continue ခရစ္စတိုဖာပေါက်ကျိုင်း ၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ (၂၈)
Posted on June 22, 2013 at 3:48pm0Comments
(၅၉) ၀ါးတောကွင်းကျေးရွာ၌ ဆေးခန်းဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း နှင့် စာကြည့်တိုက်ထောင်ပေးခြင်း
စနေဓမ္မမိတ်ဆွေများအဖွဲ့သက်တမ်း ၂ နှစ်ခန့်ရလာသောအခါ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်တို့ရွာတွင် ဆေးခန်းတစ်ခု ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းရန် စိတ်ကူးရသည်။ ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဟိုးယခင် ပါတီကောင်စီလက်ထက်ကတည်းက သားဖွားဆရာမ တစ်ဦး ချပေးထားသည်။ ထိုစဉ်က ဆေးခန်းရှိသည်။ ဆေးခန်းမှ တော်တော်ကြီးကြီးဖြစ်၏။ မိသားစုတစ်စု ကောင်းကောင်းနေလို့ ရသည်။ အမှန်မှာ ဆေးခန်းပင်မဟုတ်ပါ။ အိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ ထိုအိမ်၌… Continue AddaBlog Post
You need to beamember of Myanmar in Singapore to add comments!
Join Myanmar in Singapore
At 11:10am on November 24, 2012, Aye Nyein said… ခုလိုနားလည်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ သူတို့အတည်မပြုရသေးဘဲနဲ့ တင်ရပါ့မလားလို့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာ ပူညံပူညံဖြစ်နေလို့ ဖြုတ်ခိုင်းလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘလော့မှာလဲ ဖြုတ်လိုက်ပါပြီ။ အားလုံးအတည်ပြုပြီးတော့မှ ပြန်တင်ပါမယ်။
အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးတွေပါနေတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေ မဖြစ်ရလေအောင် လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ At 11:02am on November 24, 2012, Myanmar Roommate said… ဟုတ်ကဲ့ပါ.. ဆရာအေးငြိမ်း.. http://shwenyein.blogspot.sg/2012/11/blog-post_21.html?m=1 - "မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်နှင့် စင်ကာပူရောက်မြန်မာတတ်သိပညာရှင်၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ" ပို့စ်ကို Facebook မှာ sharing လုပ်ထားရာများမှ သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာနေထိုင်နေတဲ့ မြန်မာတတ်သိပညာရှင်တွေအတွက် အကျိုးရှိစေမဲ့ ပို့စ်ကောင်းဖြစ်တာမို့ ဒီMySing မှာ source လင့်ခ် နဲ့တကွ တဆင့် ကူးယူဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ့ blog မှာဖတ်မိတဲ့ ပထမဆုံးပို့စ် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ လက်ရှိဖော်ပြထားတဲ့ပို့စ်ကိုလည်း ဆရာအနေနဲ့ blogspot ပို့စ်မှာဖော်ပြရေးသားထားတဲ့ အချက်အလက်သတင်းအချို့မှာ အတည်ပြုသတင်းများ မဖြစ်သေးဘူးလို့ အကြောင်းကြားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာ့ ပို့စ်များကို ကူးယူဖော်ပြတဲ့အခါ ခွင့်တောင်းပြီးမှ ကူးယူဖော်ပြစေချင်တယ်ဆိုတာ ယခုသိရှိလိုက်ရပါပြီ။ နောင်အကြိမ်များ ဆရာ့ပို့စ်များအား ဖတ်ခြင်း ပြန်လည်ဖော်ပြမျှဝေခြင်းတို့အား အထူးဆင်ခြင်ပါ့မယ်။ MySign မှပို့စ်ကို ဆရာ့ဆန္ဒအရ ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်။ At 1:17pm on November 11, 2012, ၀တ်မှုန် said… တရုတ်ပြည်နှင့် အာဖရိက Ref: KoHtayWin blog ကိုထပ်တင်လိုက်ပါတယ်။
http://myanmarinsingapore.com/xn/detail/2316969:BlogPost:339326?xg_source=activity At 1:00am on January 29, 2012, Ko Thura said… ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကိုသူရ At 9:10pm on January 24, 2012, Ko Thura said… ဆရာ ခင်ဗျား -
ဆရာ့ကို ယုံကြည်အားကိုးစွာဖြင့် တစ်ခုလောက် မေးခွင့်ပြုပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော်သည် စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လာလုပ်ဖို့ ဒီမှာ ဆေးစစ်ကြည့်တာ တီဘီဓါတ်မှန်မှာ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ။ တီဘီရှိနေတယ်လို့ အဖြေထွက်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဆုတ်သမားတော်ကြီး နှစ်ဦးနဲ့ ပြသကြည့်ပါတယ်။ တီဘီအတွက် blood test လုပ်ခိုင်းလို့ ထပ်လုပ်ရပါသည်။ အဖြေကတော့ တီဘီမရှိပါတဲ့။
ကျွန်တော်သည် 2000 ခုနှစ် က တီဘီကို အပြင်းအထန် ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်။ တစ်နှစ်ကျော် ဆေးစားပြီးလို့ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒါ အခုကျမှ ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တော့ ဓါတ်မှန်မှာ တီဘီအရိပ်လက္ခဏာများ တွေ့ရတယ်လို့ ဓါတ်မှန်ဆရာဝန်က ပြောပါသည်။ သို့သော် သမားတော်နှစ်ဦးစလုံးက ပြောတာတော့ တီဘီမဟုတ်ပါ။ ယခင်က ဖြစ်ခဲ့ဘူးသော ဒဏ်ရာဟောင်း scar သာ ဖြစ်သည်ဟု အတည်ပြုပြောဆိုကြပါသည်။
အဲဒါ ပထမ ပြကြည့်သော သမားတော်ကတော့ ကျွန်တော့အတွက် ဆေးထောက်ခံစာ တစ်စောင်တော့ ရေးပေးလိုက်ပါသည်။ စာထဲမှာက တော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က တီဘီ ဖြစ်ဘူးသည်။ တစ်နှစ်ကျော် ဆေးကုသခံယူပြီး ဖြစ်သည်။ ယခု လက်ရှိအခြေနေတွင် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သည်။ ဓါတ်မှန်စစ်ချက်အရ ယခင် ဒဏ်ရာဟောင်း scar တွေ့ရှိရသည်။ အလုပ်အကိုင်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ကြံ့ခိုင်မှု ရှိသည်။ တစ်နှစ်တစ်ခါ check up ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုသည် ဆိုပြီး ထောက်ခံစာ ရေးပေးထားပါသည်။ ယခင်က ဓါတ်မှန် အဟောင်းများကို တင်ပြရန် ယူသွားဖို့နဲ့ treatment တစ်နှစ်ကျော် ယူထားပြီး ပျောက်ကင်းသွားပြီး ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပြဖို့လည်း အကြံပြုထားပါသည်။
ဒုတိယ ပြကြည့်သည့် သမားတော်ကလည်း တီဘီမဟုတ်၊ ယခင်ဒဏ်ရာဟောင်း scar ဖြစ်သည်။ ဆေးစားရန် မလို။ ဆေးစားလို့လည်း scar က မပျောက်ပါ။ နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုရင် သူတို့ကတေ့ ပြန်လွှတ်မှာပဲ။ scar ရှိရင် မရ။ ထောက်ခံစာလည်း သူတို့က လက်မခံဘူးလို့ အဲသလို ပြောပါသည် ခင်ဗျား။
အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ တီဘီရောဂါမရှိပါဘဲ ယခင်ဒါဏ်ရာဟောင်း scar ရှိနေခြင်းကို ဓါတ်မှန်များနှင့်သမားတော် ထောက်ခံစာနှင့်တကွ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ တင်ပြလို့ ရနိုင် မရနိုင်၊ စင်္ကာပူ ကျန်းမာရေးဌာနမှ အဆိုပါ ကေ့စ်မျိုးအတွက် ဘယ်လို သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတာ သိချင်ပါသည် ခင်ဗျား။
ဆရာ ဦးအေးငြိမ်းက စင်္ကာပူမှာ နေတာကြာပြီဆိုတော့ အဆိုပါကိစ္စမျိုးအတွက် ကြားမြင် သိရှိထားတာမျိုး ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ဆရာ့ကို အကူညီတောင်းရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် အဲဒီရောက်မှ အလုပ်ရှာရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထွက်ခွာရန်အတွက် လေယာဉ်လက်မှတ်နဲ့ ဗီဇာများလည်း စီစဉ်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်မေးခွန်းများသည် ဆရာ့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်မယ်၊ တစ်စုံတစ်ရာ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ပါသည် ခင်ဗျား။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းများကို မဖြေပဲ နေလိုက နေလို့လည်း ရပါသည် ခင်ဗျား။
ကိုသူရ At 1:09pm on January 17, 2012, Ko Thura said… ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကိုသူရ At 1:00pm on January 17, 2012, Ko Thura said… ဆရာ ခင်ဗျား-
ကျွန်တော် တစ်ခုလောက် မေးချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်က စင်္ကာပူကို Computer Network Engineer လိုင်းနဲ့ ထွက်လာဖို့ ပြင်ဆင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ အခု s-pass က မချပေးတော့ဘူးလို့ ပြောသံကြားရပါတယ်။ မတ်လအတွင်း ချမပေးတော့ပဲ မတ်လ နောက်ပိုင်းမှ အစည်းအဝေးပြန်ထိုင်ပြီး ချ / မချ ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဖေဖေါ်ဝါရီ် လဆန်းပိုင်းလောက် ထွက်လာဖို့ ပြင်ဆင်ထားလို့ပါ။ အဲဒါ ဆရာများ သိထားတာရှိရင် ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည် ခင်ဗျား။
ကိုသူရ At 2:11am on January 8, 2012, Ko Thura said… ဆရာ့ရဲ့ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးချက်ကို လက်ခံရရှိပါသည်။ ကျေးဇူးပါဆရာ။ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။
ကိုသူရ At 8:33pm on January 7, 2012, Ko Thura said… ဆရာ ခင်ဗျား- ဆရာ့ရဲ့ ခရစ္စတိုဖာ ပေါက်ကျိုင်း၏ အထုပ္ပတ္တိ ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရတာ အရမ်းအကျိုး ကျေးဇူး များပါသည်။ အဲဒီအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဆရာ့ကို ကျွန်တော် သိလိုတာလေး တစ်ခုရှိလို့ မေးပါရစေခင်ဗျား။ နိုတြီပြန်ထားပြီး MOFA မှာ တံဆိပ်တုံးထုထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေက သက်တမ်းဘယ်လောက်အထိ အကျုံးဝင်ပါသလဲ။ ကျွန်တော် လုပ်ထားတာတော့6လ လောက်ရှိနေပါပြီ။ ကျွန်တော် စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လျှောက်ဖို့ရာမှာ သုံးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆရာ သိထားတာများ ရှိရင် အမြန်ဆုံး ဖြေကြား ပေးစေလိုပါသည် ခင်ဗျား။
ကိုသူရ No comments yet!
Welcome toMyanmar in Singapore
● စင်္ကာပူအကြောင်း၊ သတင်း
● မြန်မာအကြောင်း၊ သတင်း
● အလုပ်ကိစ္စနှင့် Pass
● ကျောင်းကိစ္စနှင့် သင်တန်း
● ကွန်ပျူတာနှင့် နည်းပညာ
● လူမှုဘ၀နှင့် အထွေထွေ
● ရင်ဖွင့်ရန် ကဏ္ဍများ
● Debate ကဏ္ဍများ
● mysing နှင့် ပတ်သက်၍
● View All Discussions
● AddaDiscussions
● Popular Blog Posts
● View All Blog Posts
● AddaBlog Post
© 2016 Created by Admin Team. Powered by